ကောင်းကင်ကို: 11/01/2007 - 12/01/2007
This news story about Karen Refugees from Myanmar (formerly Burma) details their journey from Thailand to the U.S. where many are finding their way to Baptist churches.
Posted by Kaung Kin Ko at 11:23 AM No comments:
10000 candles for Free Burma
Posted by Kaung Kin Ko at 11:11 AM No comments:
ဒုက္ခမီးလျှံထဲက ကရင်ကလေးငယ်တို့ ရဲ့ ပညာရေး
Posted by Kaung Kin Ko at 8:47 AM No comments:
Labels: Video, Video(Human Right), Video(Minorities), Video(Poverty), Video(Refugees)
VOA (Video သတင်း)(UN evnoy urges Vietnam to help resolve Burma)
Posted by Kaung Kin Ko at 8:26 AM 1 comment:
Moe Thee Zun's speech
Posted by Kaung Kin Ko at 9:37 AM No comments:
Zoya Phan's story
Zoya Phan isahigh profile Burmese refugee and pro-democracy campaigner for Burma Campaign UK. This video was produced by Al Jazeera for their Power & People program.
Posted by Kaung Kin Ko at 9:24 AM No comments:
Labels: Video, Video(Human Right), Video(Refugees)
မနေ့ က နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့ ဟာ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဦးသန့် ကွယ်လွန်တာ ၃၃ နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန့်အရေးအခင်းအကြောင်းနဲ့ ဦးသန့် ကျူးဘားသမ္မတ ကက်စထရိုနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးပြန်အလာမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုနဲ့ တခြားဦးသန့် ပါဝင်တဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဦးသန့်အရေးအခင်းအကြောင်း သူရိယဂျာနယ်ကဆောင်းပါးကိုလည်း download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နိုဝင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့ ဟာ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ဦးသန့် ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၆၁ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၇၁ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ဦးသန့် ကို ၁၉၀၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ မှာ ဧရာဝတီတိုင်း ပန်းတနော်မြို့ မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၂၈ မှာ ပန်းတနော်မှာ ကေဵာင်းဆရာပြန်လုပ်ပါတယ်။ ၁၉၃၁ ခုနှစ်မှာ ကေဵာင်းအုပ်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာ အတွင်းရေးချုပ် Dag Hammarskjold(Sweden) ကွန်ဂိုနိုင်ငံကို အသွားလေယာဉ်ပျက်ကျ ကွယ်လွန်ရာ ဦးသန့် ဟာ အများသဘောတူရွေးချယ်ချက်နဲ့ နိုဝင်ဘာလမှာ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ ပထမသက်တမ်း (၁၉၆၁-၁၉၆၆) ကျူးဘားဒုံးပျံ အကြပ်အတည်းနဲ့ကွန်ကိုပြည်တွင်းစစ်ကို အောင်မြင်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်လို့ ချီးကျူးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၆၆မှာ ဒုတိယအကြိမ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အရွေးခံခဲ့ရပြီး ၁၉၇၁ မှာ ရာထူးမှ အနားယူခဲ့ပါတယ်။
ဦးသန်ႚ ဟာ၁၉၇၄ခု နိုဝင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့ မှာ နယူးယောက်မြို့ မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်နေ့ မှာ ဦးသန့် ရုပ်အလောင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဦးသန့် ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ထင်ပေါကျော်စောမှုကို မနာလိုတဲ့ ဦးနေဝင်းအစိုးရဟာ ဦးသန့် ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ကျိုက္ကဆံမြင်းပြိုင်ကွင်းဟောင်းမှ္ဘာပီးစလွယ် ထားကာ ထိုက်တန်တဲ့အခမ်းအနားမပါပဲ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေႚ၊ နေႚလည် ၁ နာရီ အခဵိန်မှာ ကြံတော သချိင်္ုင်းမှာ သင်္ဂြိုလ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ဈာပန အဖြစ် တခမ်းတနား ဂုဏ်ပြုသင်္ဂြိုလ်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆနေတဲ့ ကျောင်းသားထုဟာ ပေါက်ကွဲပါတော့တယ်။
ကေဵာင်းသားမဵား ဦးဆောင်သည့် ရဟန်း ရှင်လူပြည်သူ အပေၝင်းက ဦးသန်ႚ ႟ုပ်ကလာပ်ကို တက္ကသိုလ် နယ်မြေဘွဲ့ နှင်းသဘင် ခန်းမရှေ့ သို့ သယ်ဆောင် လ္ဘာပီး၊ ကေဵာင်းသား သမဂ္ဂ အဆောက်အဦဟောင်း (၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၇ရက်နေ့ မှာ ဦးနေဝင်းအစိုးရက ဒိုင်းနမိုက်ဖောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အဆောက်အဦး) နေရာကိုရှင်းလင်းပြီး အုတ်ဂူတည်ဆောက်သင်္ဂြိုလ်ဖို့ လုပ်ကြတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဂူဗိမာန်ကိုလည်း တည်ဆောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ဗိသုကာကျောင်းသား များနဲ့Civil ကျောင်းသားများက ပုံဆွဲပြီး ဦးသန့် အုတ်ဂူနဲ့ ယာယီဂူဗိမာန်ကို ကျောင်းပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသားများက စတင်ဆောက်လုပ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့ မှာတော့ နေဝင်းစစ်အစိုးရဟာ တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲကို ကျူးကျော်ပြီး ကျောင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းပါတော့တယ်။ ကျောင်းသားတချို့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ အုတ်ဂူကို ဖောက်ခွဲပြီး သင်္ဂြိုလ်ပြီးတဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို ထုတ်ယူသွားပါတော့တယ်။
နေဝင်းအစိုးရရဲ့ ရက်စက်မှုကို မကျေနပ်တဲ့ ပြည်သူတချို့ ဟာ အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီယူနစ်များ၊ ရဲစခန်းများနဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံတချို့ ကို တန်ပြန်မီးရှို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ မှာသေနတ်သံတွေဆူညံသွားခဲ့ပါတယ်။ဦးနေဝင်း အစိုးရဟာ တင့်ကားတွေနဲ့ လှည့်လည် စစ်ရေးပြခဲ့ ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဦးနေဝင်းအစိုးရဟာ ဦးသန့် ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ကန်တော်မင်ပန်းခြံမှာ မြှုပ်နှံလိုက်ပါတယ်။
ဦးသန့်ကျူးဘားသမ္မတ ကက်စထရိုနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးပြန်အလာ
UN building, Russian Kusnetsov arrives, meets with U Thant, Cuban Missile crisis eases
U.N.'s 20th year, 1965/06/28 (1965)
Download ဦးသန့် အရေးအခင်းစာအုပ်(စက်မှုတက္ကသိုလ် စိုးဝင်း) (1.1 MB)
Posted by Kaung Kin Ko at 9:54 AM 1 comment:
Labels: U Thant, Video
Video(Lives of Refugees, How to trade gems right now?(Make interview withahidden camera), Forced labour,Porter, Lives of Monks, Economic sanction)
ံHow to Trade Gems?
“Right now isalittle difficult?”
“Because of political problems”
“You transfer the cash to me and you remit to our Bank account to Singapore”
Lifes in Thailand
“The situation inside Thailand is not good for Burmese people because most of us are illegal” “Now many students and many politicians are hidden from Thai police.”
“How do the thai authority make your life here diffitult?”
“Madam please, I don’t want to talk about Thai Government”
Posted by Kaung Kin Ko at 9:25 AM No comments:
Labels: Video, Video(Human Right), Video(Minorities), Video(Refugees)
ကဗျာဆရာအောင်ဝေးနဲ့interview
ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်ဟာ စင်ပြိုင်အစိုးရ တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။ (အောင်ဝေး)
Posted by Kaung Kin Ko at 7:54 AM No comments:
A Song for Aung San Suu Kyi
Posted by Kaung Kin Ko at 7:29 PM No comments:
Labels: Video, Video(Political songs)
November 22 (News)
မြန်မာကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ဆုံးဖြတ်ချက် ကုလသမဂ္ဂ၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်
ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများအား မြန်မာစစ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား
များကို ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ထောက်ခံသူတို့ဘက်က အနိုင်ရသည်။
ယမန်နေ့က ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီတွင် ကုလသမဂ္ဂ
အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ထောက်ခံမဲ (၈၈) မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ (၂၄ ) မဲ၊
ကြားနေမဲ (၆၆) မဲဖြင့် အနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ခောတ်ပြိုင်
News Watch ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့် တပတ်ပိတ်ပင်ခံရ ခောတ်ပြိုင်
ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးများတွင် ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိဓာတ်ပုံ နေရာမပေးရဟု အမိန့် ထုတ် DVB
Posted by Kaung Kin Ko at 7:20 PM No comments:
မျှော်လင့်ချက်တွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ လှိုင်းအသစ်ကို
လှိုင်းတွေရဲ့ တပ်ဦးမှာ ကရုဏာရှင်တို့ ဦးဆောင်တယ်။
မိစ္ဆာကမ်းခြေမှာတော့ သွေးဆာနေတဲ့ ဘီလူးကြမ်းတို့ စောင့်တယ်။
လှိုင်းတွေဟာ ပြည်သူ့ ရင်ထဲမှာ နေရာအပြည့်ယူတယ်။
မိစ္ဆာကမ်းခြေကတော့ မျက်ရည်မြစ်ရဲ့ နံဘေးမှာ အခိုင်အမာ ကျောက်ချတယ်။
လှိုင်းတွေဟာ ရွှေရောင်သင်္ဃန်းနဲ့ ပြည်သူ့ မေတ္တာကို လွှမ်းခြုံဆင်မြန်း ထားသလို
သွေးတွေနဲ ဆိုးထားတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းခေါင်းစည်းနီနီကိုလည်း စည်းထားတယ်။
မိစ္ဆာကမ်းခြေကတော့ မာယာမျက်နှာဖုံးကို ပေါ်တင် ချွတ်လိုက်ပြီး လူသတ်ဝတ်စုံကို ဖရိုဖရဲ ဝတ်ဆင်တယ်။
လှိုင်းတွေရဲ့ မြှားဦးဟာ တုပ်နှောင်ထားတဲ့ ကြိုးတွေကိုဖြတ်ဖို့ လမ်းမပေါ်ကိုထွက်လာတယ်။
မျက်ကန်းကျည်ဆန်တချို့ ကတော့ လေထုကို ထိုးခွဲပြီး ဝိညာဉ်ခြွေဖို့ ထွက်လာတယ်။
လှိုင်းတွေဟာ ပစ်ကွင်းထဲကို အတင်းတိုးဝင် ပြီး ဘဝကိုချကျွေးတယ်။
မိစ္ဆာကမ်းခြေကတော့ ရင်နှစ်သည်းခြာတွေရဲ့ သွေးနဲ့ ပလ္လင်ကိုဆေးတယ်။
ကြယ်တွေကို ကာကွယ်မပေးနိုင်တဲ့ လောကစောင့်နတ်တွေကိုလည်းမုန်းတယ်။
ပန်းပွင့်တွေကို လိုက်ခြွေနေတဲ့ မုဆိုးတွေကိုလည်းမုန်းတယ်။
သင်တို့ ဟာ ရဟန်းပျိုတွေကို မြိုတဲ့မြွေတွေဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ရင်သွေးကို ကိုယ်တိုင်သတ်ပြီး ယစ်ပူဇော်ရက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ …ရန်သူ အကြမ်းဖက်လို့ လှိုင်းတို့ တလှမ်းဆုတ်ခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလှိုင်းဟာ မြုံနေတဲ့ အနာတခုဖြစ်တယ်၊
ဒီလှိုင်းက ထွက်တဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ 
ရင်ထဲက အမှောင်တွေကို ထွန်းချင်တယ်။
ဒီလှိုင်းဟာ ငါတို့ အတွက် မျှော်လင့်ချက် ဆွဲလည်းသံဖြစ်သလို
ရန်သူ့ နားစည်ကိုဖောက်ခွဲမယ့် ဒက်ဆီဘယ်(လ်) ၁၀၀ကျော်ပြင်းအားနဲ့ခြိမ်းခြောက်မိုးခြိမ်းသံလည်းဖြစ်တယ်။
ဒီလှိုင်းဟာ ရှင်ဥတ္တမ ဝင်စားသလို
ဒီလှိုင်းရိုက်ခတ်သံ မှာ အောင်ဆန်းရဲ့အရိုးတွန်သံကြားနိုင်သလို
ဂန္ဒီရဲ့ငိုရှိုက်သံကိုလည်းကြားနိုင်တယ်။
ဒီလှိုင်း မှာ ကောင်းခြင်းမှန်သမျှ စုဆုံတယ်။
သွေးချင်းချင်းနီအောင် ခြစ်ခဲ့သူတို့ …
သင်တို့ လက်သည်းချွန်တွေ ကျိုးကျန်စေရမယ်။
ပိုအားကောင်းတဲ့ ချော်ရည်လှိုင်းတွေနဲ့ 
မိစ္ဆာကမ်းခြေကို ငါတို့ အပြီးဖြိုမယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 9:30 AM 12 comments:
Trailer for Ditactors(Rambo)
Posted by Kaung Kin Ko at 8:44 AM No comments:
Labels: Video, Watch MTV
Migrant wokers news in Korea
အစပိုင်းမှာ ခဏစောင့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ နောက်ပိုင်းမှာ သတင်းတွေပြောပါလိမ့်မယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 8:30 AM No comments:
Labels: Video, Video(Human Right)
အာဆီယံ အစည်းဝေး (20/11/2007)
Posted by Kaung Kin Ko at 8:00 AM No comments:
Burma - Burma says it can handle itself (SBS 20/11/07)
Posted by Kaung Kin Ko at 7:50 AM No comments:
အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး(Nov 19) VOA မြန်မာပိုင်း
Posted by Kaung Kin Ko at 9:19 AM No comments:
အကယ်၍ မင်းဘဝတခုလုံးကို ပေးပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရတဲ့ အရာရာကို ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီးနောက် အင်မတန်မှသေးငယ်တဲ့ တန်ဆာပလာ အရာရာနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်.....
အဲဒီလိုပဲ မင်းမှာ စိတ်အင်အားကလွဲလို့ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့တဲ့ အခါ အဲဒီ့စိတ်အင်အားကို ခိုင်မာစွာနဲ့ ပဲ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်.....
Posted by Kaung Kin Ko at 8:40 AM No comments:
Genocide(Durfur and Burma) and Bejing Olympic
Posted by Kaung Kin Ko at 9:01 AM No comments:
Labels: Video, Video(Human Right), Video(Minorities)
Pinheiro အင်းစိန်ထောင်မှာ စုစုနွေးတို့ နဲ့ တွေ့ ခဲ့(အင်းစိန်ထောင်မှာ စုစုနွေးတို့ နဲ့ တွေ့ ခဲ့ (MRTV 3)
Posted by Kaung Kin Ko at 11:10 AM No comments:
Two Women and Democracy(အန်တီစု နဲ့ ဘနာဇီဘူတို)
Imprisioned Burmese leader Aung San Suu Kyi and former Prime Minister of Pakistan Benazir Bhutto are two women currently fighting for democracy against military rule.
Posted by Kaung Kin Ko at 11:05 AM No comments:
Labels: Video, Video(Aung San Suu Kyi)
Mr. Pinheiro's Tour (at Thursday)
Posted by Kaung Kin Ko at 11:01 AM No comments:
Video advocates BURMA ISSUES travel deep into the jungles of eastern Burma to document one of the world's most urgent and most forgotten emergencies.
Posted by Kaung Kin Ko at 11:00 AM No comments:
Food Fair for the Burmese new comers
Food Fair to benefit the new comers from Burma. It's very difficult for these people to adjust to the new environment and every little bit of support will help tremendously. If you feel compassion to help these people, the contact information is in the content of the video. Thanks for watching the video.
Posted by Kaung Kin Ko at 5:55 PM No comments:
Posted by Kaung Kin Ko at 9:40 AM No comments:
Labels: Depayin, Video, Video(crackdown), Video(Human Right)
Posted by Kaung Kin Ko at 9:00 AM No comments:
ဒီပဲယင်းသက်သေ (ကိုမင်းသိန်း နဲ့ interview)
August လတုန်းက မစုစုနွေးတို့ ကို အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပုံ
Posted by Kaung Kin Ko at 9:17 AM No comments:
Labels: Video, Video(crackdown), Video(Human Right)
August လတုန်းက မစုစုနွေးတို့ ကို အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပုံ(၂)
Posted by Kaung Kin Ko at 9:08 AM No comments:
August လတုန်းက မစုစုနွေးတို့ ကို အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပုံ (၃)
Su Su Nway Demostration
Posted by Kaung Kin Ko at 7:00 AM No comments:
ဘုန်းမော် (၁၉၈၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ရက်နေ RIT မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဘုန်းမော်နေ့ )
Posted by Kaung Kin Ko at 8:33 AM 1 comment:
Labels: Phone Maw, Video
In August and September 2007 the people of Burma rose up to demand their freedom. This video is dedicated to them.
The clips are arranged, to the best of my ability, in chronological order.
Some brief notes: the man making silent appeal in front of the US mission in Rangoon (just past the 1 minute mark) is in the back of the truck that drives away; the highlight at 5:48 shows Kenji Nagai photographing the demonstration near Sule Pagoda just before his death.
1988 တုန်းက ပစ်ခတ်မှုများ (Video Documentary_1988)
Posted by Kaung Kin Ko at 8:45 AM No comments:
Labels: 1988, Video, Video(crackdown)
1988 Uprising Documentary(Part 1)
Posted by Kaung Kin Ko at 8:37 AM 1 comment:
1988 uprising documentary(Part-2)
Posted by Kaung Kin Ko at 8:35 AM No comments:
1988 တုန်းကမြို့ တော်ခန်းမရှေ့က ဆန္ဆပြပွဲ (Hunger Strike in front of Rangoon City Hall in 1988 )
Posted by Kaung Kin Ko at 8:27 AM No comments:
Labels: 1988, Video
Bush denies double standard for dictators in Burma, Pakistan
Posted by Kaung Kin Ko at 7:49 AM No comments:
Posted by Kaung Kin Ko at 7:45 AM No comments:
Labels: Video, Video(Human Right), Video(Poverty)
Demonstration in Union Square, New York - USA
Posted by Kaung Kin Ko at 7:35 AM No comments:
Labels: Video, Video(Human Right), Video(Political songs), Video(Poverty)
Video (Aung Sann Su Kyi)(The Prisoner of Rangoon)
Posted by Kaung Kin Ko at 10:17 AM No comments:
Video (Song) Free the World! "InaSingle Day"
Posted by Kaung Kin Ko at 5:20 PM No comments:
Labels: Video(Human Right)
KT Tunstall ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုသီဆိုထားတဲ့ သီချင်း
T Tunstall dedicates 'Suddenly I See" to Aung Sang Suu Kyi on the day that Aung Sang Suu Kyi had been under arrest for 12 years - October 24th 2007
Posted by Kaung Kin Ko at 10:05 AM No comments:
Visit toarefugee camp on the Thai-Burma Border
Posted by Kaung Kin Ko at 9:53 AM 1 comment:
Labels: Video, Video(politics), Video(Refugees)
VOA (Video သတင်း)(UN evnoy urges Vietnam to help r...
Video(Lives of Refugees, How to trade gems right n...
Burma - Burma says it can handle itself (SBS 20/11...
Pinheiro အင်းစိန်ထောင်မှာ စုစုနွေးတို့ နဲ့ တွေ့ ခဲ...
August လတုန်းက မစုစုနွေးတို့ ကို အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီး...
ဘုန်းမော် (၁၉၈၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၃ရက်နေ RIT မှာကျင်းပခ...
1988 တုန်းကမြို့ တော်ခန်းမရှေ့က ဆန္ဆပြပွဲ (Hunger S...
Bush denies double standard for dictators in Burma...
KT Tunstall ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုသီဆို...